Mota Radio GPS Navigation Stereo E46 China Manufacturer
Tsanangudzo:Mota Radio GPS Stereo E46,Mota Radio Navigation Stereo E46,Mota Radio GPS Navigation E46
Home > Products > Bmw Android Mota Dvd Player > Mota Radio GPS Navigation Stereo E46
Mota Radio GPS Navigation Stereo E46
Muenzaniso Nha.: KD-7503
1. Iye zvino isu tinopa anopfuura mazana matatu emamodeli admin Mota yeDVD player inosanganisira ese mhando dzemotokari DVD DVD dze BMW E39 nhevedzano. Ese mota yedu dvd player ine newest software uye papuratifomu, yakagadzikana uye inokurumidza. Kuti avimbise mhando, iyi Porsche mhando mota DVD player ine CE / FCC / RoHs / E-MARK chitupa. Hupenyu mweya yedu!
2. Iyi modhi yemotokari DVD chinoridza BMW E39 mhando yakagadzikana kwazvo ikozvino. Isu tinobvuma basa reOEM. Iwe unogona kushandisa yako yako dhizaini logo, kurongedza uye UI. Yedu yekugadzira kugona kwemotokari iyi DVD player yeBMW E39 Android mota DVD ingangoita zviuru makumi maviri pamwedzi, saka, hapana kunetseka nezvechigadzirwa. Tichagara tiri pano uye takagadzirira kubatsira.
3.Our motokari DVD chinoridza BMW E39 mhando kusanganisira admin uye wince Car DVD Player, ane makore 7 ruzivo mukugadzira, kugadzira uye kushambadzira Car DVD mutambi, isu takamisa hukama hwebhizinesi nevatengi vanokoshesa kubva kuJapan, Russia, Ukraine, Turkey, Spain, Germany, Italy, Iran, Pakistan, Dubai, Israel, Korea, Saudi Arabia, India, Brazil, nezvimwewo. Car DVD inoridza BMW E39 inozivikanwa kwazvo kutenderera pasirese.
Mifananidzo yeKaradio Radio GPS Navigation Stereo E46:
Fekitori uye yemuenzaniso kamuri reKlyde
Product Categories : Bmw Android Mota Dvd Player
9 Inch Yakwana Kubata kweKadjar 2016 Bata Ikozvino
Quad Core Android 5.1 JAC J5 Navigation Bata Ikozvino
Android 8.0 HONDA ACCORD 8 Car DVD Bata Ikozvino
Hyundai Sonata 2016 android 7.1 mota multimedia system Bata Ikozvino
Mota Radio GPS Stereo E46 Mota Radio Navigation Stereo E46 Mota Radio GPS Navigation E46 Mota Radio Stereo GPS Mota Stereo yeE46 Mota Radio Stereo yeCOLOLLA Mota Stereo yeE46 M3 Mota Audio Stereo yeLC100